बायर्नको ध्यान डर्टमन्डतिर
बर्लिनलाई गाह्रो कुन तथ्यमा पनि थियो भने टिमको प्रदर्शन उकास्न आफ्नै मैदानमा घरेलु समर्थक थिएनन् । त्यसमाथि बर्लिनका प्रहरीले क्लब समर्थकलाई रंगशालाबाट टाढै रहन चेतावनी दिएका थिए ।
जेष्ठ ६, २०७७ द गार्डियन
बर्लिन — बायर्न म्युनिखका लागि यो खेल फेरि एकपल्ट उस्तै बानी परिसकेको सधैंको प्रतिस्पर्धा जस्तै रह्यो । तर गुपचुप र सुनसान दर्शकबिना सुरु भएको बुन्डेसलिगा धेरैका लागि अझै पचाउन गाह्रो छ ।
जर्मन च्याम्पियनले युनियन बर्लिनलाई हराएर सजिलै ३ अंक बटुल्यो । लिगमा अब बायर्नले बोरुसिया डर्टमन्डविरुद्ध खेल्नु र मिति छ मे २६ । यो खेल डेल क्लारियर नामले प्रख्यात छ । बर्लिनमाथि प्राप्त दुई गोलको जितमा एक रोबर्ट लेवान्डोवस्कीको नाममा रह्यो ।
उनले पेनाल्टीबाट गोल गरेका थिए । त्यसपछि जोसुआ किमिचको कर्नरमा डिफेन्डर बेन्जामिन पाभर्डले दोस्रो गोल थपे । अघिल्लो दिनमात्रै डर्टमन्डले साल्के ०४ लाई चार गोलले हराएको थियो । त्यसमा विजयी टिमको प्रदर्शन उच्चस्तरको थियो । त्यसैले बायर्नले यही डर्टमन्डको सामना गर्दा बर्लिनविरुद्ध खेलेभन्दा केही बढी राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । तर अहिले तत्काल लिगमा प्राप्त लगातार आठौं जितले लागिरहेको छ, लिग उपाधि बायर्नको नजिक छ ।
गोलरक्षक म्यानुयल नोया पनि भन्छन्, ‘सायद हामीले आज बर्लिनविरुद्ध आफूले सक्दो खेल्न सकेनौं कि ? तर खेल पूर्णतः हाम्रो नियन्त्रणमा थियो । जित र त्यसबापत प्राप्त ३ अंकका लागि हामी पूर्ण हकदार थियौं ।’ बर्लिन भने आरामले अंकतालिकाको मध्यभागमा छ । यो सुरक्षित स्थिति हो । गत सिजनमात्र बढुवा पाएको बर्लिनले त्यसयता जर्मनीको माथिल्लो डिभिजनमा ठीकठाक खेलिरहेको छ । तर उसका लागि पनि बायर्नको सामना गर्नु सजिलो थिएन ।
बर्लिनलाई गाह्रो कुन तथ्यमा पनि थियो भने टिमको प्रदर्शन उकास्न आफ्नै मैदानमा घरेलु समर्थक थिएनन् । त्यसमाथि बर्लिनका प्रहरीले क्लब समर्थकलाई रंगशालाबाट टाढै रहन चेतावनी दिएका थिए । सुझाएको थियो, घरमै बसेर टेलिभिजनमा खेल हेर्नु । तर पछि समाचार के पनि आयो भने केही दर्जन समर्थक रंगशाला छेउछाउ देखा परिहाले । खेलका क्रममा बर्लिनका प्रशिक्षक उर्स फिसर पनि मैदानमा देखिएनन् । किनभने उनी एक प्रकारले कारबाहीमा थिए ।
उनले क्वारेन्टाइनको नियम तोडेका थिए, स्विट्जरल्यान्डमा रहेको आफ्नो परिवारलाई भेटेर । उनले तय गरेको रणनीति भने खेलमा क्रममा प्रस्ट देखियो । यो थियो, केही बढी रक्षात्मक खेल्नु र चाहिएको बेला दबाब सिर्जना गर्नु । हेर्नु, यही स्थितिमा कुनै राम्रो अवसर पो निस्कने हो कि ? यसैअनुसार खेल्दै बर्लिनका लागि सुरुमा नाइजेरियाली फरवार्ड एन्थोनी उजाहले राम्रो मौका पनि बनाएका थिए, खेलको सुरुआततिरै ।
तर विस्तार खेल अगाडि बढ्दै गयो । यससँगै बढ्यो बायर्नको खेलमाथिको नियन्त्रण पनि । खेलको १८ औं मिनेटमा थोमस मुलरले बललाई जाली पनि चुमाएका थिए, तर त्यो अफसाइड रह्यो । भार पद्धतिबाट तय निर्णय बर्लिनका लागि ठूलो राहत बनेको थियो । आखिरमा बायर्नले प्राप्त गरेको पेनाल्टीमा लेवान्डोवस्कीले गोल गरिहाले र यो उनको सिजनको ४० औं गोल रह्यो । उनले लगातार पाँचौं सिजन ४० गोलको उपलब्धिलाई छोएका छन् ।
तर भन्नुपर्छ, बायर्नको खेलमा त्यो सुमधुर थिएन । जति उसले युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा चेल्सीलाई फेब्रुअरीताका हराउँदा प्राप्त गरेको थियो । खेल सकिन १० मिनेट अगाडि पाभर्डले दोस्रो गोल थपे र जित निश्चित गरे । यो बायर्नको वास्तवमै खेलमाथि पूर्ण नियन्त्रण भएको प्रदर्शन नै रह्यो । खाली कति भने यसमा केही प्रश्न उठाउन मिल्ने ठाउँ मात्र रहे । तय छ, जति बेला बायर्नले डर्टमन्डको सामना गर्नेछ, त्यो क्लबको खास परीक्षा हुनेछ ।
– जोन ब्रेविन
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०८:२९